Kutheni iifowuni ze-lg zingathandwa njengokuba zazinjalo ngaphambili?
Eyona Iindaba Kunye Nokuphononongwa Kutheni iifowuni ze-LG zingathandwa njengokuba zazinjalo ngaphambili?
Imarike yefowuni ye-smartphone yindawo apho ezinye iinkampani ezinkulu kwihlabathi zilwa nezinyo kunye nezikhonkwane kubathengi & rsquo; ingqalelo kwaye, ewe, imali. Ngokwendalo, silandela ngokusondeleyo ezo ntengiso ziphezulu, abaphumeleleyo kweli dabi libalaseleyo, kodwa ngoku & rsquo; Siza kujonga amanye amaxhoba omzabalazo ongapheliyo wokubonelela ngeyona mali ifanelekileyo ye-smartphone enokuyithenga. Kwaye ezi aren & apos; ezinye zeziqalo ezingahleliwe ezize nomqondo opholileyo wesixhobo esingazange sigqithe kwinqanaba labo lokufumana imali. Sithetha ngee-giants zobugcisa ezibonakala ngathi zilahlekile. Siza kujonga ngakumbi kwezinye zeenkampani, ukuqala nge-LG. Namhlanje, kweli nqaku lokuqala lothotho lwe-mini, siza kuhamba ngaphezulu kwinto ebangele ukuba i-LG iwele phantsi kwindlela yayo engabalulekanga.
IBootloop, elo gama lingcolileyo
I-LG ibisoloko iyenye yeefowuni ezinkulu, ngakumbi eMntla Melika, kodwa kutsha nje, izinto azibanga nayo i-rsquo; ihamba kakuhle kwinkampani. Ngelixa kwi-2014 LG Mobile yayonwabile ukuthengisa irekhodi , Kwi-2018, inkampani yabona ukwehla kwe-26% ngonyaka-kwi-smartphones ezithengisiweyo, kuqhubeka isilayidi ezantsi ukusuka kwiitrime zangaphambili, kuphakamisa inkxalabo kubatyali zimali nakubaphathi ngokufanayo.
Isithonga sokuqala esibi kwi-LG & rsquo; s ifike ngo-2015. I-rsquo s-flagship, i-G4, Imiba ye bootloop , Ukunyanzela abasebenzisi ukuba bafune amaziko enkonzo ukuze bafumane izixhobo zabo ukuba ziphinde zisebenze kwakhona okanye bafumane ukutshintshwa. Ngelishwa, uninzi lwe-G4 kunye ne-rsquo; zize nomcimbi ofanayo, oqondayo ukuba uninzi lwenze ukuba lungaze lucinge nge-LG smartphone kwakhona.
Ukuzama ukushukumisa izinto nge-G5 elandelayo, i-LG igqibe kwelokuba ibheje kwimodyuli. Isixhobo esivunyelweyo ukuba sinamathiselwe kwiifowuni ezahlukeneyo, sinikwe ukusebenza okongeziweyo. Ngelixa oko kuvakala kupholile ephepheni, ukuphunyezwa kwe-LG kunye ne-rsquo; umbono wawungalunganga, ukuwuguqula ube kukungabikho kobuthathaka kwifowuni kunamandla. Iimodyuli ezinokutshintshana zazilinganiselwe kwinani kwaye ziluncedo kwaye zingqineke zingathandwa ngabathengi, into esiyibonileyo kamva kunye neMotorola Z2.
Ukhetho-zonke iimodyuli ezifumanekayo kwi-LG G5
Umlandeli we-G5 & rsquo; LG, G6, wasn & rsquo; ta enkulu, nokuba iphuma nge-Snapdragon 821 SoC xa abo bakhuphisana nayo beguqula i-gen-snapdragon 835 elandelayo. icandelo lokugqibela, ukumakisha isitrayikhi sesithathu se-LG ngaphambili.
Mna ThinQ LG uneengcinga ezimbi
Ukulungiswa kwangoko komgca we-G, i-LG G7 ThinQ, sisixhobo esihle ngokubanzi. Yintoni i-rsquo; engalunganga ngayo, njengoko ngokungathandabuzekiyo uqaphele, ligama layo. I-LG igqibe kwelokuba ibethe ngempama izixhobo zayo zokwenza uphawu lophawu & ldquo; ThinQ & rdquo; Amagama ee-smartphones zayo zakutshanje zeeflegi ngokunjalo. Oku kwakuthetha ukubonisa indlela ifowuni yakho eya kusebenza ngokulula ngayo nefriji yakho ye-LG okanye umatshini wokuhlamba umbulelo kwitekhnoloji ye-AI ye-LG kunye neapos. Endaweni yoko, yongeze ukudideka. Akukacaci nokuba igama lophawu lwe-ThinQ limele ukubizwa njani.
Emva kwexesha ebomini be-G7 ThinQ kwafumaniseka ukuba ukubonwa okuphezulu kunokubangela ukusebenza kwebhetri engaphantsi komndilili . Ngelo xesha, nangona kunjalo, i-LG & rsquo; s flagship yayihamba kakhulu phantsi kwe-radar nangona kunjalo kwaye abantu babejonge kwenye indawo ngesixhobo sabo esilandelayo.
Kunye noluhlu lwee-smartphones ze-G, i-LG yaqala ukukhupha izixhobo eziphathwayo eziphezulu phantsi kochungechunge lwayo lwe-V ngo-2015. Iiterations ezimbini zokuqala (i-V10 kunye ne-V20) zaziphawuleka kakhulu kwiscreen sayo esincinci ngaphezulu ukufikelela ngokukhawuleza kwiiapps, into eyahlukileyo namhlanje ebonakala ngathi 'ngutat'omkhulu' woyilo lwenotshi oluqhelekileyo.
I-V10 kunye ne-V20 zamkelwe kakuhle ngabo babenzela ukutya, kodwa yayingeyonxalenye enkulu yesiseko sabathengi. Izixhobo zazinkulu xa kuthelekiswa nabantu abakhuphisana nabo kwaye zazingakhange zibukeke zilungile. Ukubanakho ukubuyisela ibhetri yayikukulalana kunye nokuqina kwezixhobo njengoko zazisilela ukuxhathisa amanzi, nto leyo uninzi lwayo olungazange luthethelele izibonelelo. Ukusukela ngoko, i-LG ithathe indlela ekhuselekileyo, kungoko i-V line hasn & rsquo; yahluke kakhulu kumgca we-G, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kwezinye iiflegi kwintengiso. Ukusilela kwempumelelo yomibini le migca kubangele amarhe okuba I-LG inokugqibela ngokudibanisa le migca mibini .
Ngasekhohlo yi-LG G7. Ngasekunene-LG V40. Umahluko uyamangalisa!
Ngaphambili kwesoftware, i-LG ayinayo i-rsquo; ayisebenzi kakuhle. Inkampani idume ngokuba icotha kakhulu ukukhupha uhlaziyo oluphambili lwesoftware eziphathwayo kunye nokushiya inkxaso ngokupheleleyo ngokukhawuleza, ukunamathela kuphela kuhlaziyo lwezokhuseleko ngamanye amaxesha. I-LG ibekwe kwindawo ye-16 phakathi kwabavelisi be-smartphone xa kufikwa kuhlaziyo lwesoftware, ngokwe AOSMark . I-UX yesiko le-Android yesiko le-UX ayisiyiyo eyokuqunjelwa ecaleni kwabanye babenzi, kodwa ikude lee kwi-snappiest.
Xa kuziwa kwiikhamera, ii-LG kunye neeapos ze-smartphones zikumgangatho xa kufikwa kubuchwephesha bobuchwephesha kwaye yayiyeyabo babhengeza ilensi ye-engile ebanzi. Nangona kunjalo, iapps yekhamera ye-LG & apos isasalele ngasemva. Inkampani yayingomnye wabokuqala ukubonelela ngolawulo olululo kwabo bafuna ukuthatha iifoto 'zobungcali' ngeefowuni zabo ngaphandle kokufaka ii -apps zomntu wesithathu, kodwa ukusukela oko wasilela ukuzisa nantoni na enomdla. Ngapha koko, kuthathe ixesha elide ukuba i-LG yongeze imo yomzobo kwiifowuni zayo, endaweni yoko ijolise ekuphuhliseni iindlela zekhamera ezinesiphukuphuku ngobukrelekrele bokufakelwa obakhelwe ngaphakathi. Eyona nto yakutshanje ye-LG eza nayo, ebizwa ngokuba yiTriple Shot, ithatha umfanekiso yeekhamera ezintathu eziphambili kwi-LG V40 kunye nevidiyo efanelekileyo yesilayidi, kodwa kuthatha ixesha elide ukuyenza yonke loo nto, kwaye ukubaluleka kwento leyo kuyathandabuza. Enye indawo ebuthathaka ye-LG & apos; iiflegi zeekhamera ezijonge ngaphambili, kwaye sonke siyayazi indlela abanye abantu abakhathalele ngayo iiselfie.
Ngaphandle kokuthumela amanani entengiso ye-smartphone yekota enye emva kwenye, njengesiphumo sabathengi & rsquo; Ukuphelisa ukuthembela kwi-brand, i-LG yenqabile ukwenza uhlengahlengiso kwenye yezona zinto zibaluleke kakhulu: ixabiso. Ngaphandle kwayo nayiphi na into enomdla wokunikezela kunye nokwahlulahlula kukhuphiswano, i-LG ngeyazama ukuphumelela ezinye iziseko zomsebenzisi ezilahlekileyo ngokunikezela ngeefowuni ezisemgangathweni ngexabiso eliphantsi. Endaweni yoko, iqhubekile nomoya wokunyuka kwamaxabiso ngaphandle kokuwaxhasa ngezinto ezipholileyo ezinokufumana abantu kunye ne-rsquo; I-Quad DAC iya kwenza ngaphezulu ukwenza umntu abe ngu-google ukuba kuthetha ukuthini kunokubaqinisekisa ukuba bathenge i-smartphone.
Kwicala eliqaqambileyo, ubuncinci obuqaqambileyo kwabo bafuna ifowuni ye-LG, amaxabiso eefowuni zayo ezitsala ngokukhawuleza ayehla, kwaye emva kweenyanga nje ezimbalwa, izixhobo zinokuba sisivumelwano.
Sukulindela ukuba ii-smartphones ze-LG zinyamalale nangaliphi na ixesha kungekudala, nangona kunjalo. Icandelo lokuhamba liyinxalenye encinci ye-LG Corp. Nokuba ayenzi mali njengeyunithi eyahlukileyo, iya kuqhubeka ikho njengesixhobo sokuthengisa.
Ukuba ufuna ukufunda malunga nomenzi olandelayo esivavanyileyo, jonga inqaku lethu Kutheni le nto ii-smartphones ze-HTC zisuka kwezithandwayo zaza zangaziwa?
Yeyiphi imisitho yeSkram kwi-Agile?
Amarhe: Umlandeli we-iPhone SE usemsebenzini, oza kutyhilwa ngasekupheleni kuka-Agasti
Iitoti zenkunkuma ezikwi-Android 12 inokukuvumela ukuba ugcine, ubuyisele, okanye ucime umphelo iifayile
I-AT & T isondele ekuthengiseni i-DirecTV kunye ne-AT & T TV NGOKU-ingxelo